Siyaabaha aad ula xiriirto geeyo Spotify
Links Qaybta 1.Spotify rasmiga ah
Spotify waa caan geeyo music madal iyo waxa uu abuuray sumcad tan iyo markii la bilaabay sanadkii 2008. Waxay leedahay tiro badan oo ah dadka isticmaala iyo database badan oo music. Arrintan oo uu weheliyo faafidda music la Spotify, taageerayaasha codsigan ayaa koray. Goobo badan, pages taageere iyo websites caawimaad ka soo. Spotify ayaa ku faafay oo dhan internet-ka iyo wixii la leeyahay waxa ay taageerayaasheeda, saxeexaaga dhijitaalka ah iyo jiritaanka internetka. Spotify uu leeyahay jiritaanka ah oo ku saabsan ku dhowaad madal kasta dadweynaha. Waxaad ka heli kartaa Spotify on Facebook, Twitter, Tumblr, iyo xataa Google+. Waxaa jira kooxo maamulo ku shabakadaha, kuwaas oo qaar badan oo rasmi ah oo u gaar ah.
Maqaalkani waxa uu soo bandhigi doono si rasmi ah iyo qaar ka mid ah shaqsi caan ah oo maamulo pages iyo websites in laga yaabo in ay waxtar iyo booqo ee isticmaala Spotify.
1.Spotify links rasmiga ah
Waa bog aad loo jecel yahay ee shabakadda Facebook ah. Boggan waxaa uu leeyahay in ka badan 7 milyan oo kale oo si joogto ah sii kordhaysa. Bogga waxaa lagu casriyeeyaa oo waxaa jira posts iyo news cunaa si joogto ah. Waa bogga rasmiga ah App. Waxaad ka heli kartaa updates ugu dambeeyey music, videos oo albums on bogga. Raac inuu sii joogo updated. Noqo qayb ka mid ah kacaankii music la Spotify iyo biiro bogga si ay u taageeraan.
Twitter Waa goob lagu Saxaabada, iyo stats si cad u muujinaya in ay jiraan in ka badan hal million oo loogu Spotify. Waxaad raaci kartaa xisaabta, sii updated la tweets iyo wax ka badan. Waxaad heli kartaa liiska oo xiriir la heli karo si ay files kala duwan si aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah ilaha Spotify. Waxaad wadaagi kartaa faylasha, views iyo videos on bogga.
3. Google daray: https://plus.google.com/+Spotify/videos
Boggan waa Google+ ku qoray akoonkiisa rasmiga ah ee Spotify. Waxaad raaci kartaa iyo aragtida liiska aad, muusiko iyo sidoo kale sii updated ah oo ku saabsan dhacdooyinka dunida music ah. Account waa mid aad u firfircoon oo ka jawaabaan. Waxaa jira warbixin joogto ah oo ay aad si fiican u yihiin in waqtiga si aad u dhakhso ogahay sida ay dhacaan.
Tani waa bogga rasmiga ah ee bulshada Spotify. Waxaad raaci kartaa updates, akhri articles iyo galaan CHAT la raaca la shaqayn jiray. Waa miiska info one stop iyo 'Kasta Oo Ku Saabsan Spotify' bogga. Waxaa jira ee 'dadka cusub ee qaybta halkaas oo aad ka heli karto dhammaan faahfaahinta aasaasiga ah ee Spotify. The 'blog Community' si uu ugala hadlo oo dhan aad rabto in aad ku saabsan music iyo Spotify. Waxaad sidoo kale qeyb ka mid ah 'chat ku sifayn' waxay noqon kartaa inay ka wada hadlaan oo ku saabsan ku sifayn ama 'chat topic off' inuu la hadlo dad kale oo badan oo ku saabsan music. Share iyo dhaafsadaan playlists aad la isticmaala oo waxaa jira cod bil kasta playlist meesha aad ku codeyn kartaa adiga oo ugu cadcad. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa iyo tiirarkeeda ku saabsan mawduucyo kala duwan ama arimaha soo food saaray dadka isticmaala iyo wada hadlaan xal dhibaatooyinka kuwa.
Raac Spotify ee Tumblr oo sii casriyeeyaa Wararkii Ugu Danbeeyay ee shabakadda. Waxaad wadaagi kartaa playlist, raac dhagaystayaasha kale oo ka heli links ee kuwan raadkaygay music dambeeyay. Waxaa oo dhan aad samayn karto Tumblr.
Marka laga soo taggo bogaggan si rasmi ah, waxaad gaadhnaa fiirin badan. Ma aad heli doontaa oo dhan ku caashaqa oo Spotify hadalka iyo la wadaago ee page hal. Midkoodna ma waxaad ka heli kartaa oo dhan updates iyo wararka iyaga on. Haddii aad diyaar u badan oo ku saabsan Spotify iyo dadka ogaan yihiin, waxaad booqan kartaa user abuuray blogs kuwaas oo aad u hesho war ku saabsan cunaa music iyo Spotify.
Hackers Life waa goob blog fiican, halkaas oo aad ku raaci karaan isbeddellada ugu dambeeyay, wax ka ogaado fikradaha mowduuca mid ka mid ah wada hadal. Under tag Spotify ah, oo aad ka heli doonto updates ku qoraalkii codsiyada, playlists, war iyo wax ka badan. Articles sida 'sida inuu ka soo kabsado playlists tirtiray' ama 'liiska ugu sareeya 5 adeegyada geeyo' waxay noqon kartaa mid waxtar leh waab iyo wargelin ah u akhristayaasha. Waxa kale oo aad ka heli kartaa in aad ka ogaato ka tuuryo iyo Talooyin iyo tabaha in aad isticmaasho codsiyada.
Spotifyartists goobta si fiican u gurato. Qaybaha ayaa waxaa loo kala saaraa in tabs sida, "blog '' Spotify sharaxay 'iyo qaar badan oo. Waxaad ka heli kartaa dhammaan faahfaahinta aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Spotify. Waxaa jira Hanuuniyaa caawimo, si loo yareeyo aad waayo-aragnimo la Spotify. Read articles ka qora in ay sii joogaan faahfaahsan oo ku saabsan isbeddellada ugu dambeeyey iyo wararka ku saabsan adduunka music iyo dhacdooyinka ee Spotify. Waxa kale oo aad ka heli kartaa wararka ku saabsan cunaa fanaaniinta iyo kaalintii ay ku joogto.
Last.fm lala adeeg blog this ayaa qol wada hadal firfircoon u Spotify caashaqi jiray. Waxaad ka heli kartaa threads badan hadlayaan ku saabsan mawduucyo la xiriira Spotify. Waxaa jira mawduucyo sida 'sida loo isticmaalo Spotify Scroobler', ama arrimaha sida 'tirtirto kuwan raadkaygay ka shilalka playlists'. Saasuuna halkan xal dhibaatooyin aad ka heli karto iyo sidoo kale boostada threads si ay u bilaabaan wada hadal cusub.
Pansentient waa goobta blog la updates news si joogto ah a. Waxaad u baahan tahay macluumaad, tani waxay noqon kartaa kaalinta aad ku kalsoon tahay. Waxaa jira qaybta u gaar ah Spotify. Hel u eegid, comments, blogs, qori baaritaan ku saabsan mawduucyo gaar ah oo dood iyo dheeraad ah, oo dhan ee Pansentient. Waxaa jira playlist laga heli karo dhegeystayaasha oo aad raaci kari weyday oo wuxuu ku raaxaysan aad maalin. Article waa wargelin ah oo cajiib ah.
Waxaa jiro liis ku qoran forums wadahadal iyo sidoo halkaas oo aad ka heli karto dhammaan faahfaahinta iyo jawaabo su'aalo ah ee aad
> Resource > Spotify > Siyaabaha aad ula xiriirto Spotify Streaming